Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Kevin Mbabu Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi bu Kevin Mbabu na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, nna nna, ezinulo, umunne, na enyi nwanyi / nwunye. N'ikwu nke a karị, ndụ Mbabu, Ndụ nke onwe n'èzí football na Net Worth, wdg.
Na nkenke, anyị nwere Life Life nke Mbabu, onye egwuregwu bọọlụ ga-enye Prime Gareth Bale ọsọ maka ego ya - n'ọsọ ụkwụ. Lifebogger malitere akụkọ ya site na mbido ụbọchị rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ ịgụ gbasara onwe gị na-atọ gị ụtọ banyere ọdịdị na-adọrọ mmasị nke Kevin Mbabu's Bio, anyị gara n'ihu ịwepụta Early Life and Rise Gallery. Lee uzo ndu Raster Rocket si achikota ihe omuma ya.
Akụkọ banyere Kevin Mbabu - Lee mmalite ndụ ya na nnukwu ịrị elu.
Ee, onye ọ bụla maara ọsọ ọsọ ya, ike ya, na ike bụ nnukwu akụ ya. N'ikwu nke a, Kevin Mbabu bụ ebu nke England na azụ, Kyle Walker.
Site na otuto niile gbara ya gburugburu, ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole hụrụ football n'anya gụrụ Kevin Mbabu Life Story. Maka nke a, Lifebogger edeela Bio a maka ọrụ gị. Ugbu a, na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Kevin Mbabu Child Story:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha RastaRocket. Melingo Kevin Mbabu mụrụ na 19th ụbọchị nke Eprel 1995 na nne ya, Françoise Mbabu, na Nna amaghi ama, na Chêne-Bougeries, obodo dị na Switzerland.
Ndị Switzerland ọkachamara na-agba ọsọ na-abịa ụwa dị ka nwa nwoke nke abụọ n'ime ụmụaka anọ (nwanne nwoke, nwanne nwanyị, onwe ya, na obere nwanne). Childrenmụaka niile mụrụ nne ha (Françoise), Nna mụrụ, yana n'ikpeazụ, Nna Nzọụkwụ. Nke a bụ Françoise, nne Kevin Mbabu.
Zute otu nne na nna Kevin Mbabu - Mama ya (Françoise). Nna Ya nke Bi Ndụ, dịka nke mgbe m dere akụkọ ndụ ya, amabeghị ya.
RastaRocket, dika ha gụrụ ya aha, etinyeghị oge nwata ya naanị, mana ya na ụmụnne ya. Kevin Mbabu nwere naanị otu nwanne nwoke nke tọrọ ya. Aha ya bụ Dave, (ka m na-ede) ọ bi na United States.
Kevin nwere otu nwanne nwanyị nke okenye (nwa okenye nke ezinụlọ) nke aha ya bụ Prisca Mbabu. N'ikwu nke a, nwanne ya nwanyị nke ọdụdụ (otu nne na nna dị iche) na-akpọ Bianca.
Ndụ Kevin Mbabu:
N'ebe a, anyị ga-agwa gị banyere mmalite mmalite nke RastaRocket. Ihe mbụ mbu, ndị bọọlụ Switzerland sitere na ezinụlọ kwụsiri ike, nke nwere udo. Ọ bụ ezinụlọ nwere obi ụtọ nke nna ya (Bernd Adam), Mama, na ụmụnne ya MA na-enweghị Nna Ya.
Zute ndị Kevin Mbabu weere dị ka ndị ezinụlọ ya.
Gini mere ezigbo nna nke Kevin Mbabu anoghi na foto a? Nke a bụ n'ihi na ọ hụbeghị ya.
Banyere papa nna Kevin Mbabu:
N'ụzọ dị mwute na n'ihi ihe ndị a na-amaghị, ezigbo Nna ya kwụsịrị alụmdi na nwunye ya na nne ya mgbe ọ dị ime ya.
Mgbe nkewa ahụ gasịrị, papa Kevin Mbabu furu efu n'ime obere ikuku, pụọ na ezinụlọ ya. Ọ hapụrụ mama mama Kevin Mbabu (Françoise) naanị ya. N'ezie, o siiri ya ike igbochi nwa ya bu n'afọ (ya) na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Prisca Mbabu.
Ọ bụrụ na m zutere ya, m ga-enwe ọtụtụ ajụjụ. Mana n'ezie, enweghị m mkpa maka nzukọ dị otu a n'ihi na enwere m onye (onye bu nna ya) nke were ọnọdụ ya.
Kevin Mbabu kwuru okwu a dị mkpa mgbe ya na onye nta akụkọ egwuregwu na-agba ajụjụ ọnụ.
Na mbido, mama ya maara na Prisca na Kevin ga-ata ahụhụ na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ha tolite na nna na-anọghị na ndụ ha.
Maka nke a, Françoise kpebiri na ya ga-alụ onye ọzọ. Nne nke abụọ zutere ma hụ enyi ya nwoke Austrian n'anya, onye bụzi nna nke Prisca na nwa ya nwoke na-agba bọl.
Kevin Mbabu Ezinụlọ:
Ihe mbu mbu, ndi okacha amara amara nke Switzerland nwere mba di iche-ma obu i gha akpọ ya Biracial. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, o nwere ọbara French (site n'aka papa ya) NA nke Bantu ma ọ bụ Mangbetu-Azande agbụrụ Congo site na Françoise (nne ya).
Nne Kevin Mbabu nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na Democratic Republic of Congo. N'aka nke ọzọ, Nna ya amaghị Nna ya sitere na Europe, kpọm kwem France. Nzọụkwụ Kevin bụ onye Ọstrịa, ya onwe ya mụrụ na Switzerland.
Foto a na-akọwa Kevin Mbabu Family Origin na-eji mba nke mama ya na nna nna ya.
Kevin Mbabu Mmụta na Bulọ Ọrụ:
Dị ka ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ, RastaRocket gara ụlọ akwụkwọ na Chêne-Bougeries - obodo Switzerland. N'oge ahụ, ọ gbara ọtụtụ bọọlụ (dịka onye na-eti ihe), ọkachasị mgbe emechiri ụlọ akwụkwọ.
N'ịchọpụta ikike okike ya, nzọụkwụ Kevin Mbabu papa m (Bernd Adam) duuru ya gaa n'ụzọ nke ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Ewezuga nwoke a, nwata nwoke agagh enwe uzo. N'ezie, Bernd Adam bu onye choputara ma webata onye ozo ya na football.
Kevin Mbabu Football Akụkọ:
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke ịghọ egwuregwu, Franleteoise na Bernd Adam mere ihe niile ha nwere ike ime iji kwado ọchịchọ ya. Banye na agụmakwụkwọ football na mbido bụ ihe Kevin Mbabu Mum na Step-Papa chọrọ maka nwa ha nwoke ha hụrụ n'anya.
Yiri nwanne nwoke Congo (Denis Zakaria), obere Kevin (dị ka ụzọ isi tọọ ezi ntọala maka ọdịnihu ya) debara aha na Servette FC. Nke a bụ otu obere bọọlụ na obodo ya ebe o nwere ikpe ikpe izizi ya.
Ná mmalite, ọ nwetara aha aha ahụ (RastaRocket) n'ihi ịbụ nwa ewu mara mma nke nwere nnukwu ọsọ. Na mgbakwunye, Mbabu nwere njigide njigide a na ikike sitere n'okike gafere ndị na-emegide ya.
Lelee ụzọ o si agba ọsọ. You nwere ike ịsị na ọ nwere ọsọ ọsọ - n'oge ọ bụ nwata.
Na mbido ya na Servette, Kevin rụrụ ọrụ na ọnọdụ 9 - dị ka onye na-eti ihe. Onye nkụzi ya mbụ kwadoro ọnọdụ ahụ n'ihi na ha chọpụtara na o nwere ọtụtụ ume, ngwangwa, na ọsọ.
Mgbanwe ahụ gaa n'ọnọdụ nchekwa (aka nri) bịara n'oge na-adịghị anya (dị ka nnukwu ihe ijuanya) ekele maka mgbakwunye Mbabu nke ịme Ntugharị Ntugharị. Switzerland Diamond dị afọ 15 mgbe ọ tụgharịrị site na onye na-egbu ya gaa n'aka nri.
Ọnwụnwa United United:
Ná mmalite nke ụbọchị agụmakwụkwọ ya, Kevin Mbabu (n'afọ 2010) nwetara òkù maka ikpe otu izu na ụlọ ike Bekee - Manchester United.
Ọ bụrụ na ị maghị, nwata ahụ dị afọ 15 zụrụ ọzụzụ na U18s nke United na ebe ha bi. Ebe ọ bụ na Mbabu na-asụ French (asụsụ ọmụmụ nke nna ya), ọ dịịrị ya mfe ijikọ ma mee enyi na kpakpando ụwa n'ọdịnihu. Paul Pogba.
N'ikwu okwu banyere ahụmịhe United, Speedster chetara otu oge;
Pogba lere m anya ma gosi m dika nwanne, gosi m obodo.
Enwere m obi ụtọ na amatala onye ọkpụkpọ dị ka ya, bụ onye toro nnukwu kpakpando. Ọ bụ ezigbo nwoke.
Lee n'oge ahụ, Paul Pogba amaghị mgbe ọ bụla na kpakpando a (Kevin Mbabu) ga - eweta enyemaka nke ga - enyere aka iwepụ obodo ya (France) site na ọkwa Euro 2020 knockout.
Ọnwụnwa United Post - Na-arụ ọrụ na Nlekọta na Nri:
Bịaru okenye, Mbabu zutere ihe a na-atụghị anya ya - Mmerụ ahụ. Ogbenye Kevin nwere mmerụ azụ maka ọnwa ise na ọkara - nke mere ka ọ buru ihe nkwado.
N'oge oge mgbake ahụ, ọ kpọrọ - omume nke iji ahụ ya dị elu eme ihe. N'ikwu nke a, Mbabu kpụ ọkụ n'ọnụ rụrụ ọrụ ntụrụndụ ya (ịgba ịnyịnya). N'ikwu okwu banyere nke a, o kwuru;
Anọ m na-agba ịnyịnya ígwè ọtụtụ mgbe m merụrụ ahụ ma nke ahụ nyere aka ịba ụba apata ụkwụ m. Enwere m akara ole na ole n'ihi nke ahụ.
Gbaso mmega ahụ m, ahụrụ m dị egwu ma dịkwa ọsọ ọsọ.
Mgbe m lechara onwe m anya, achọpụtara m na m dị ezigbo elu ma e jiri ya tụnyere ndị ọgbọ m.
Mbabu bidokwara buru otutu akwukwo nri na ihe na emeputa mmiri ara ehi efu. Mgbe ọ drinkingụsịrị mmiri buru ibu, tii dị obere, na ụra ọzọ, ọ gbaghaara 100% site na mmerụ ahụ.
Mgbe ọ lọghachitere na ahụike zuru oke, o juru ndị enyi ya niile anya na Mbabu gbanwetụrụ ngwa ngwa, ume, na ahụ ike. N'ezie, ndị na-amaghị Mbabu na-eche na ọ nwetara ozu ya site na nketa ezinụlọ.
Kevin Mbabu Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ka ọ na-erule afọ 16, ọtụtụ n'ime ndị dike Europe nọ na-achọ ịlụ ya. Ndị a ma ama n'etiti ha bụ Arsene Wenger si Arsenal. Onye nchịkwa France maara mkpa ọ dị inweta ọsọ ọsọ dịka Kevin Mbabu. N'ihi ya, ọ chọsiri ike.
Na-awụ akpata oyi, Servette na-achọ ịchụ ego. Ndị nne na nna Kevin Mbabu enweghị mmasị na nke ahụ. Ha jụrụ onyinye Arsenal nyere nwa ha nwoke. Françoise (nne ya) na Bernd Adam (Nzọụkwụ Papa) lere ya anya dị obere ịhapụ ezinụlọ ya na obodo amụrụ ya.
Senior Football na Newcastle Deal:
Mgbe Arsenal nwụsịrị, ọ gara n'ihu na agụmakwụkwọ ya na Servette. Mmalite nke oge 2012–13 mere ka Mbabu bulie ndị otu Servette nke mbụ ebe ọ pụtara n'ọtụtụ egwuregwu.
N'ụzọ na-akpali mmasị, n'oge ahụ, Kevin amalitela ịdọrọ ndị Europe kwesịrị ekwesị karị. Onye kachasị n'ime ha bụ Alan Pardew's Newcastle United.
Na mbido 2013, nne na nna Mbabu alaghị azụ maka ịfefe nwa ha nwoke. Ugbu a weere na o tozuru okè, ọ nwere ike ịhapụ ma ezinụlọ ya ma obodo ya ibi na-adịgide adịgide na England. Kevin bịanyere aka na Magpies afọ atọ na ọkara.
Dị ka ọtụtụ ndị mba ọzọ - dịka; Ayoze Perez na Florian Thauvin, Nwa amaala Geneva biri nke ọma na ndụ na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ England. Kevin Mbabu masịrị ndị Fans Newcastle ọkachasị n'ike ya kachasị - ọsọ, ume, osooso, na ịme ihe eji egwu egwu.
Kevin nwere ihe kacha mma Pedro na nke a. Ọ ghọrọ Newcastle ozugbo.
N'ịlaghachi gị n'okporo ụzọ ebe nchekwa, ọ ga-amasị gị ịmara na Mbabu nwere ndị na-agba ụkwụ ndị a dịka ndị otu ya na Newcastle. Ha gụnyere; Papiss Demba Cissé, Jonjo Shelvey, mbubreyo Cheick Tioté, Sammy Ameobi, Jamaal Lascelles na Aleksandar Mitrovic, wdg.
Pundits toro ọrụ ọma Kevin Mbabu karịsịa megide nnukwu ìgwè dị ka Chelsea FC. Lelee vidiyo nke ụfọdụ n'ime ihe ngosi kachasị mma nke ụbọchị ọrụ Newcastle.
Nhụjuanya Ahụhụ Ọzọ:
Mgbe England nọ, onye iro ochie ahụ bịaghachiri na-eso ya. Kpamkpam na oge nke 2014–15, ọrụ Mbabu kwụrụ - ebe ọ merụrụ ahụ.
N'ezie, nke ahụ bụ ihe nwute - nke wutere ezinụlọ ya dum. Ihe mmerụ ahụ mere ka ọ ghara ịhapụ ohere ndị otu mbụ na Newcastle United. Ebe ọ bụ na Kevin na-ata ahụhụ mgbe niile, a manyere Newcastle ịwepụ ya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ihi ebumnuche a na - amaghị ama - ikekwe mmerụ ahụ, Mbabu enweghị otu egwuregwu maka Rangers, ụlọ egwuregwu football na Scottland.
Newcastle ezigala ya ebe ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ nwataghị ya n’elu bench - ọbụnadị otu ugboro. Gwọọ ya!
N'ezie, ọ bụ oge ịnwale maka ndị na-eto eto Switzerland. Enweghị ekele maka mmerụ ahụ, ụbọchị Kevin Mbabu na England gụrụ.
Dị ka ụzọ isi na-aga, ọ kwenyere na nhọrọ mgbazinye ego nye Young Boys, klọb bọọlụ Switzerland na-aga nke ọma. Nke ahụ hụrụ ka Mbabu laghachikwuuru ezinụlọ ya. Mgbe oge 2015-16 gara nke ọma, onye na-eto eto (nke na-enweghị mmerụ ahụ ugbu a) bịanyere aka na ụlọ ọgbakọ afọ abụọ.
Kevin Mbabu Bio - Akụkọ nke Ọma:
Kama ịda, Speedstar si n'ike n'ike ruo ezinụlọ ya - Young Boys. N'etiti ọtụtụ ihe ngosi ya, nke kachasị ama bụ mgbe Mbabu na Pogba megharịrị ndị ha maara na 2018/2019 UEFA Champions League egwuregwu.
N'okpuru ebe a, Switzerland Rocket bụ n'ezie nro nye onye France na-egwu egwu. N'ezie, Kevin Mbabu nyere Paul Pogba ihe ọ ga-echebara echiche mgbe ha gbachara asọmpi.
Ọ gafere Paul Pogba. Mbabu enyeghi French superstar a ohere iku ume.
N'ezie, ebe ọ bụ na ọ sonyere Young Boys, Kevin eleghị anya n'azụ. Kpakpando na-eto eto na-amasịkarị ndị nkụzi ya Mbabu dị egwu (ma na nchekwa na nku nku) yana omume siri ike hụrụ ya ka ọ na-emeri ụfọdụ otuto.
Ọ ghọrọ onye agha mgbe ya na ụmụ okorobịa nọ. Lee Kevin Mbabu dị ike.
N'ịkọwa okwu mmechuihu na Newcastle United n'azụ ya, kpakpando ahụ na-eto eto gara n'ihu iji nyere Young Boys aka inweta Switzerland Super League. Ọ bụrụ na ị maghị, ndị otu ya meriri iko nke League maka oge abụọ sochiri (2017-18 na 2018–19).
Nke a bụ mgbe Mbabu mepụtara echiche ahụ dị ebube na ọ nweghị ihe ụwa nwere ike igbochi ya.
Njem ịga Wolfsburg:
N'inwe nnukwu ihe ịga nke ọma na football nke Switzerland, Kevin Mbabu chere na ọ bụ ihe ziri ezi ịhapụ ezinụlọ ya ọzọ. Nke a bụ mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta afọ anọ na VfL Wolfsburg. Ya na klọb ọhụrụ ya, Mbabu nwere ọtụtụ oge ọhụụ.
Ọ ghọrọ VfL Wolfsburg ozugbo.
Na May 2018, a na-akpọ onye na-agba ọsọ Switzerland aha n'etiti ndị otu mbido maka 2018 FIFA World Cup na Russia. A kpọrọ ya ka ọ sonyere ụdị kpakpando ndị a ma ama Granit Xhaka na Haris Seferović wdg
O di nwute, Mbabu so na aha ndi si na ndi otu ndi si na Vladimir Petković puta ya. Mgbe ndakpọ olileanya ahụ gasịrị, nwa anyị nwoke lekwasịrị anya na bọọlụ bọọlụ nwere otu ebumnuche n'uche - Ime ka obodo ya mata ihe ha na-efu.
Site na arụmọrụ ka mma na VfL Wolfsburg, Kevin Mbabu guzobere onwe ya dị ka onye na-enweghị mgbagha azụ maka Switzerland. Lelee vidio nke mere ka ọkpụkpọ oku ya zie ezi na 2018–19 UEFA Nations League.
The National Team Successga nke Ọma:
Ngwa ngwa ngwa na afọ 2021, RastaRocket gosipụtara ugbu a na ọ so na ndị kachasị mma n'ụwa. Nwa anyị nwoke abụghị naanị itinye aha buru ibu na otu ndị France - ihe dị ka nke a Kylian Mbappe na Kingsley Coman. O nyefere enyemaka na mbido Switzerland 3-3.
Dị ka ọcha dị ka ọkpọ, nke a bụ enyemaka Kevin Mbabu - nke mere ka ndị otu France na ndị na-akwado ya chegbuwe onwe ha maka ụzọ ọ ga-esi pụọ na Euro 2020 knockout.
Ọ dị ịtụnanya n'ezie na ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị ọrụ mmerụ ahụ mbụ merụrụ ahụ merụrụ ahụ mba ya ka ọ bụrụ otu n'ime ike ịrị elu nke bọọlụ Europe. N'ezie, onye ga-eche na a egbughị talent na Newcastle ga ebili elu a?
Mmetụta dị ukwuu nke Mbabu na Euro 2020 bụ nke ga - eme ka aha ya dị elu n'anya ndị na - egwu egwuregwu bọọlụ. Maka ndị agba bọọlụ, ndị kachasị mma n'ime asọmpi a chịkọtara na nke a France v Switzerland Euro 2020 gosipụta vidiyo.
Site na ịrị elu ama ama na Europe, Lifebogger na-atụ anya ihe abụọ. Nke mbụ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịnweta ụgwọ VfL Wolfsburg ka ọ nwee mmasị na klọb ndị ọzọ.
Nke abuo bụ eziokwu ọzọ na Mbabu nwere ike ịga n'ụzọ maka ịkwaga nnukwu mbufe. Ọfọn, naanị ọdịnihu ga-agwa onye a. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere onye na-agba ọsọ ndụ Switzerland, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Kevin Mbabu Hụrụ Ndụ - o nwere nwunye?
Obi abụọ adịghị ya, RastaRocket bụ onye mgba siri ike ma a bịa n'ọkwá maka onye egwuregwu bọọlụ kachasị mma n'ụwa.
N'ezie, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ụjọ ya na ọnụ ọchị ahụ mara mma agaghị eme ka ọ bụrụ onye na-ahụ ndị enyi nwanyị na ndị nwunye nwere mmasị.
Kevin Mbabu bụ ezigbo onye bọọlụ. Nwoke na-aga nke ọma dị ka ya kwesịrị nwanyị mara mma - dịka ma enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
Site na nyocha siri ike, anyị kwubiri na mba Switzerland nọ na mmekọrịta onye nwere ike ịbụ nwunye ya na nne nke ụmụ ya bu n'afọ.
Ka ọ dị ugbu a, dị ka mgbe ọ na-edekọ Bio a, mmekọrịta ịhụnanya zoro ezo nke RastaRocket gbapụrụ n'echiche nke anya ọha na eze naanị n'ihi na ọ na-eme ka mmekọrịta ya bụrụ ihe nzuzo.
Kevin Mbabu Ndụ Nke Onwe:
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ihe gbasara Switzerland - pụọ na bọọlụ niile.
Ihe ahụ bụ ọchị ya na ọchị ya. Mbabu amachaghi mma. Ọ bụ onye kwenyere na ịmụmụ ọnụ ọchị dị mma nwere ike ịrụ ọrụ ebube ma rụọ ọrụ ebube.
Ndụ Kevin Mbabu nke Onwe - KỌWA.
Nke abuo, nwa amaala Chêne-Bougeries bu onye nwere nchekwube nke na-achi ochi ichefu. N'ikwu okwu banyere àgwà a, Mbabu kwuru na Instagram ya;
Ọ dị mkpa ịchị ọchị mgbe ị nwere ike n'ihi na ọ bụ ọgwụ dị ọnụ ala.
Nke ikpe azu ma obughi opekata mpe, Swịl bọọlụ bụ nwoke nwere ejiji - nke jikọtara nke ọma na ụdị egwuregwu ya. Nke a bụ ihe ngosi vidiyo.
Kedu ihe RastaRocket na-eji ego bọọlụ ya? Ọ bụrụ na e nwere otu ihe anyị maara, ọ bụ eziokwu na ọ hụrụ n'anya ịzụta ụgbọala dara oké ọnụ maka onwe ya. Nke a bụ ụgbọ ala Kevin Mbabu.
Ndụ Kevin Mbabu - AKPLKỌ.
Mgbe anyị na-eme nchọpụta, anyị hụrụ vidio a kọwara ndụ ya. Lee ya ebe a.
Mgbe ọ gbalịsiri ike na mmerụ ahụ na ahụike, enwere nkwado ọ na-agaghị akwụ ụgwọ. Bịa na mmiri ozuzo ma ọ bụ na-enwu, ndị nne na nna Kevin Mbabu na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ anọnyere ya mgbe niile. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ha.
Banyere Kevin Mbabu nne:
Françoise bụ nwanyị anaghị ehi ụra, ọkachasị mgbe nwa ya nwoke hụrụ n'anya nọ na nsogbu. N'ezie, ọ na-echegbu onwe ya na anya ya mechiri emechi. Ọzọkwa, Mama Mbabu, Françoise bụ ụbụrụ n'azụ mkpebi nwa ya nwoke.
Banyere ijikwa nwa ya nwoke, otu n'ime oge kachasị sie ike maka mama Kevin Mbabu bịara mgbe ya na onye nwebu Servette, Majid Pishyar, sere okwu. O mere mgbe o jisiri ike jụ mkpebi ya ka Kevin Mbabu kwaga Arsenal.
Majid Pishyar (onye nwe Servette) chọrọ ego ma kpebie klọb ya ga-ere Mbabu na Arsenal. Françoise na di ya (Nzọụkwụ-Mbabu) jụrụ ịnyefe ya. Mkpebi ahụ were Majid Pishyar ezigbo iwe na iwe.
Nwa mama Kevin Mbabu ekweghị onye nwe Servette ka o nyefee nwa ya nwoke na Arsenal.
Na mmeghachi omume, o mere ka Servette mee ka onye dị afọ 16 bịanye aka na nkwekọrịta ọhụrụ nke nwere nkebi nke CHF 500,000. Dabere na ndekọ, abụghị ọtụtụ klọb sitere na Servette ga-etinye ego a na nwata ma ọ gwụla ma onye ahụ ọ bụ nnukwu onyinye.
N'ịgwa ndị mgbasa ozi banyere ọnọdụ ahụ, Switzerland kwuru;
MUm m achọghị ka m binye aka na nkwekọrịta ahụ n'ihi nkebiahịrị.
Mkpebi Françoise mere, na di ya chebere ọrụ nwa ya nwoke. Nye ọtụtụ ndị ọkachamara n'egwuregwu bọọlụ, ọ dịghị mma na nwata dị afọ iri na isii ịhapụ mba ya gaa na nke ọzọ - n'ihi egwuregwu bọọlụ ọkachamara.
Naanị kpakpando ole na ole nke afọ ahụ mere ya na Arsenal-dị ka nke Hector Bellerin na Cesc Fabregas. Na Manchester United, anyị nwere ụdị nke Gerard Pique.
Banyere Kevin Mbabu Nna:
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata banyere ya mwute nzuzo, mgbe ahụ jụrụ ya banyere ya ezigbo Nna. Nye Kevin Mbabu, nna nna ya ka na-efu ma ọ dịghị anọ na nwunye ya. N'ikwu okwu na onye nta akụkọ egwuregwu, ọ na-ekwu otu oge;
Amaghị m papa m. Enwetụbeghị m mmetụta maka ya.
Banyere Kevin Mbabu Nzọụkwụ-Papa:
Bernd Adam kariri nna kamakwa enyi nye ndi ulo ya nile. Ọ bụ nwoke mere mama Mbabu ya ihe ọchị, hichapụ anya mmiri ya site na obi mgbawa, nke kachasị mkpa, nyere ya aka ịzụlite Kevin na nwanne ya nwanyị, Prisca.
Mgbe ọ lụrụ mama m, ọ nabatara m dịka nwa nke aka ya.
Papa m bụ onye na-elekọta m. Nke ka mkpa bụ na o nyere m bọọlụ.
Kwuru na ndị bọọlụ Switzerland - gbasara nwoke mere ya ka ọ bụrụ kpakpando ọ bụ taa.
Mmụ nwanne Kevin Mbabu:
Nwa amaala Geneva nwere ụmụnne nwanyị abụọ na nwanne nwoke. N'ime ụmụnne, naanị otu bụ nwanne ya nwanyị (otu nne na papa) ma ndị ọzọ (gụnyere nwanne) bụ ụmụ nwanne ya.
Maka ebumnuche onwe ya, Kevin ahọrọla ịghara ịkọwa aha nwanne ya nwoke na ụmụnna nwanyị n'ihu ọha. N'ihi myirịta, ị nwere ike ịmata na ha bụ ụmụnne ya nwanyị - na foto.
Kevin bụ onye na-elekọta ezinụlọ ya. Nwanne ya nwanyị (n'etiti aka nri) yiri ya.
Ọ ga-amasị gị na Raster Rocket abụwo nwanne nwanne ya nwanyị nke obere. Ọ bụ nwa nwanyị nwanne ya nwanyị bụ Prisca.
Ọ na-arụ ọrụ (Ọrụ Uncle) na Nice ya.
Kevin Mbabu Eziokwu Eziokwu:
Ebe anyị soro anyị njem site na Bio, anyị ga-eji ngalaba mmechi kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland.
Eziokwu # 1 - Eziokwu efu - Ihe mere o jiri jụ Arsenal:
N'ịbụ onye sitere n'eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nwata, Kevin Mbabu mere nke ahụ mgbe ọ nụsịrị ahụmahụ dị mwute nke nwanne nwoke ibe ya na-enweghị nnukwu ọrụ na Arsenal. Onye ahụ bụ onye ọgba bọọlụ Switzerland, Johan Djourou.
Fọdụ kwuru na ndị egwuregwu bọọlụ lara ezumike nka bụ ndị amaara ama maka ọghọm ya lara Arsenal n'iyi - otu klọb nke na-ejighị ya kpọrọ ihe. Mbabu kwuru otu mgbe banyere ịjụ Arsenal na okwu ndị a;
Na mbu, odi m nma isonye na Arsenal. Echere m echiche banyere ya wee sị Mba.
Ahụghị m njikere ịga. Onye ọ bụla nọ na-agwa m banyere ihe atụ nke Johan Djourou. Taa, obi dị m ụtọ na anaghị m akwa ụta maka mkpebi m.
Eziokwu # 2 - Banyere ụjọ ya:
Banyere Kevin Mbabu Hair.
You na-eche ihe kpatara ọ ji na-aza aha aha ahụ - RastaRocket? Nke a bụ maka na Mbabu na-ahụ onwe ya dịka onye kwere ekwe n’otu Rastafaria. Nke a gosipụtara taa n'ọdịdị ya.
Ọ bụrụ na ị maghị, Mbabu eyila ụdị edozi isi ya kemgbe ọ bụ nwata. Echiche nke ịkpụ ntutu isi ya bụ NO-NO. Kevin gbochiri nke ahụ. O kwenyere na ime nke a ga-agbanwe njirimara ya ozugbo.
Eziokwu # 3 - N'iji nyocha Wolfsburg ya na nke Nkezi Citizen Switzerland:
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Kevin Mbabu'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
KEVIN MBABU WOLFSBURG A NA-AKWALKWỌ AKW INKWỌ IN EUROS (€)
Kwa Afọ: € 3,104,749
Ọnwa kwa: € 258,729
Kwa Izu: € 59,615
Kwa :bọchị: € 8,516
Kwa elekere € 354
Sekọnd ọ bụla € 0.10
Onu ogugu ndi Switzerland ndi natara Euro 55,552 ga achoro otutu afo 4.5 iji mee ugwo Kevin Mbabu nke VfL Wolfsburg.
Eziokwu # 4 - Ebumnuche n'azụ nọmba uwe elu ya:
Mbabu kpebiri iyi akara uwe ahụ maka asọpụrụ Junior Malanda, onye bụbu onye Wolfsburg nke nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala na mgbago ugwu Germany. N'okpuru ebe a, nsogbu na-adịghị mma mere na ụbọchị iri nke Jenụwarị 10.
Eziokwu # 5 - Kevin Mbabu Profaịlụ:
RastaRocket na-arụ ọrụ nke ọma dịka aka nri. Switzerland enweela ọtụtụ ọsọ iji gbaa ọkụ ma (dịka nke 2021) bụ otu n'ime ndị na-akwadoghị nkwado zuru ụwa ọnụ.
Na-ekpe ikpe site na stats ya - ọsọ ahụ na-enwu ọkụ, osooso, na ume, obi abụọ adịghị ya na Mbabu agaghị abụ enyi maka ndị ọrụ egwuregwu FIFA.
Eziokwu # 5 - Kevin Mbabu Tattoo:
Dị ka ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ, ọ hụrụ ọrụ ahụ n'anya. Kevin na-eji nke ahụ eme ihe iji mata onwe ya na nke kachasị mkpa, gosipụta mmetụta ya banyere ihe omume ndụ nke pụtara ya ọtụtụ ihe.
Ihe nke Kevin Mbabu Tattoos pụtara.
Ogbugbu zoro ezo bụ nke dị n'akụkụ aka nri nke obi ya nke nwere okwu 'Fate'. Na Kevin Mbabu Biography, anyị kwuru banyere mmepe nke ihe na - abụghị njikwa ya (Injuries). Nke a nwere ike ịkọwa ihe ederede egbugbu pụtara.
Eziokwu # 5 - Okpukpe Mbabu:
Kevin bụ nwa nwoke Onye Kraịst aha ya bụ Irish. Site n'ikwu ya, ọ ga-abụrịrị na nne na nna Mbabu zụlitere ya ịgbaso okpukpe a. N'ihi na ndị ọgba bọọlụ Switzerland anaghị egosipụta nkwenkwe okpukpe ya n'ihu ọha, anyị amaghị ma ọ bụ Roman Katọlik ma ọ bụ Protestant.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke banyere Kevin Mbabu. Ọ na - enyere gị aka ịmacha na profaịlụ ya n’enweghị nsogbu.
Aha zuru ezu: Melingo Kevin Mbabu
aha otutu: RastaRocket
Ụbọchị ọmụmụ: 19 nke Eprel 1995
Age: 26 afọ na ọnwa 5.
Nationality: Switzerland, Congo na France
Ndị nne na nna: Françoise Mbabu na Nna amaghi ama
Nwoke nna nna: Bernd Adam
Ezinụlọ sitere Congo (site na nne ya) na France (site na papa ya)
Ụmụnne: Prisca Mbabu (nwanne nwanyị nke okenye), Dave Mbabu (Nwanne nwoke torola eto) na Bianca (ọkara nwanne)
Agbụrụ: African Switzerland
elu: 1.84 m ma ọ bụ 6 ụkwụ 0 sentimita asatọ
Ezigbo Net: Nde Euro 8.5
Mgbe ịmalitere ibi ndụ nke nrọ gị, buru n'uche na ị ga-enwe ịla azụ mgbe niile n'ụzọ. Dika ozo, usoro mgbake juputara na mgbago na ala. Kevin Mbabu dị nso na ihe ịga nke ọma n'oge Newcastle ya ruo mgbe nsogbu mmerụ ahụ bịara.
Site n'ịrụsi ọrụ ike, nnọgidesi ike na nkwenye onwe onye, ​​enweghị oke njedebe ihe ọ ga - enweta na VfL Wolfsburg na ndị otu mba Switzerland. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Akụkọ ndụ anyị banyere Kevin Mbabu na-eme ka anyị ghọta na ọ bụrụ na nsogbu ahụ ka njọ, ọ ga-aka mma na nlọghachi azụ.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ka Lifebogger nwee ekele maka Bernd Adam bụ Kevin Mbabu's Nzọụkwụ Papa. N’ebe nna ya na-anọghị, Adam ji ịhụnanya dị ukwuu gọzie ya. Nke a bụ ihe ọ na-esiteghị n'aka ezigbo nna ya. Ka anyị ghara ichefu, Bernd mere ka ọ mara egwuregwu mara mma.
Kevin Mbabu Mum, Françoise egosila na ọ na - eme ọtụtụ ihe - karịa njikwa ụlọ. Ọ na-elekọta ọrụ nwa ya nwoke ma nwee mmetụta na mkpebi ndị ọ na-eme. Taa, ihe ọ bụla ọ na-eme ka ọ hapụ Newcastle ka ha mara na ha mehiere ịhapụ ya. Gụkwuo na Atlantic.
Daalụ maka ịgụ ihe ncheta a banyere RastaRocket. Na Lifebogger, anyị na-eche banyere ịde ederede na izi ezi mgbe anyị na-ede Biography Ndị na-agba ọsọ Switzerland. Jiri nwayọ rute anyị aka (site na ịkpọtụrụ peeji) ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na edemede a.
N'ikpeazụ, anyị ga-enwe ekele maka ya - ọ bụrụ na ị nyere aka tinye uche gị n'ihe ị chere banyere Kevin Mbabu na ihe anyị na-ede na prosopography ya.